ဘာစီလိုနာအသငျးတဈသငျးထဲမှာ ကစားတဲ့သူ ဖွဈနသေမြှတော့ မကျဆီဟာ စီရျောနယျဒိုထကျပိုမကောငျးဘူးလို့ အိုဇေးကတော့ ပွောပွီ…. – Premier League Special
စီရျောနယျဒိုနဲ့ မကျဆီ ဘောလုံးစှမျးဆောငျရညျ ဘယျသူပိုကောငျးလဲ….?
နောငျနှဈတှမြေားစှာကွာမွငျ့ခြိနျအထိ ဘောလုံးလောကမှာ ရေးပနျးအစားဆုံးမေးခှနျးဖွဈနအေုံးမယျ့မေးခှနျးတဈခုကို အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ကစားသမား အိုဇေးကလညျးသူ့ရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြတှနေဲ့ သုံးသပျပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။ ရီးရဲလျမကျဒရဈမှာ အသငျးဖျောဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့ မီဆူးလျ အိုဇေးကတော့ စီရျောနယျဒိုဟာ မတူညီတဲ့နီုငျငံတှရေဲ့ လိဂျတှမှော ခွစှေမျးကဆြငျးမသှားပဲ ထိပျတနျးအဆငျ့ကစားနီုငျခဲံတာကွောငျ့ မကျဆီထကျပိုမိုကောငျးမှနျတယျလို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
သူတို့နှဈဦးကို အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူတို့နှဈဦး ဘောလုံးကစားခွငျးကနေ အနားယူသှားခဲ့ရငျတောငျ ငွငျးခုနျမှုတှကေနပွေီးဆုံးသှားမှာမဟုတျပါဘူး။ ပရိသတျတှကေ စီရျောနယျဒိုနဲ့ မကျဆီ ဘယျသူကပိုကောငျးလဲဆိုတဲ့ ငွငျးခုံမှုအပျေါ အိုဇေးတို့လို နာမညျကြျောတှရေဲ့ သုံသပျမှု ထငျမွငျခကျြတှကေိုသိခငျြနကွေပါတယျ။
တနင်ျဂနှနေကေ့ ရျောနယျဒိုဟာ ဆာအူဆိုလိုအသငျးကို သှငျးဂိုးတဈဂိုးရယူခဲ့ပွီးနောကျမှာ ဘောလုံးသမိုငျးမှာ တရားဝငျဂိုးအမြားဆုံးသှငျးယူထားတဲ့ ကစားသမား အဖွဈ ဂြိုးဆပျ ဘီကနျနဲ့အတူ နံပါတျ(၁)နရောကိုရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။ သှငျးဂိုး ၇၅၉ ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီးခဲ့ပွီး နံပါတျ(၁)နရောကိုရောကျရှိလာနပေမေယျ့ အဆငျ့(၃)နရောမှာ ရှိနတေဲ့ ပီလီကတော့ သူ့ရဲ့ သှငျးဂိုးနံပါတျတှနေဲ့ အခုအခြိနျအထိ အငွငျးပှားလကျြရှိနပေါသေးတယျ။
မကျဆီဟာလညျး သှငျးဂိုးရယူထားတဲ့နရောမှာ အဆငျ့(၄)နရောမှာရှိနပွေီး (၇၄၂)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။ မကွာသေးခငျက ပီလီရဲ့ အသငျးတဈသငျးတညျးမှာ ကစားပွီးသှငျးဂိုး(၆၄၃)ဂိုးကို ကြျောဖွတျသှားနိုငျခဲ့ကာ အခုအခြိနျမှာ သူ့ရဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျသှငျးယူပေးထားတဲ့ဂိုးဟာ (၆၄၆)ဂိုးရှိလာပါပွီ။
Ballon d’Ors ဆုမှာတော့ ရျောနယျဒိုထကျ ဆုတဈဆုပိုမြားနပွေီး Free kick ကနဂေိုးသှငျးယူထားမှုမှာလညျး မကျဆီက တဈကွိမျပိုမြားနပေါတယျ။
ရျောနယျဒိုနဲ့ မကျဆီတို့ နှဈဦးစလုံးဟာ တဈခတျေထဲမှာ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ဆိုသလို ပျေါခဲ့ကွတဲ့ ကစားသမားတှေ ဖွဈကွပွီး ရျောနယျဒိုဟာ သူ့ရဲ့ စနဈကတြဲ့လကေ့ငျြမှု၊ နထေိုငျစားသောကျတဲ့ပုံစံ၊ ခေါငျးတိုကျစှမျးရညျ ၊ ဂိုးသှငျးကောငျးမှု စတဲ့ အခကျြတှနေဲ့ ထိပျတနျးအဆငျ့ကစားသမားတဈဦးဖွဈနသေလို လူငယျကစားသမားအမြားစုရဲ့ အိုငျဒေါဖွဈနသေူတဈဦးပါ။ မကျဆီကတော့ သူ့ရဲ့ ပါရမီပျေါအခွခေံပွီး လှပတဲ့ ကစားဟနျတှနေဲ့ နောကျတနျးကစားသမားတှကေို ကြျောဖွတျပွီး ထူးခွားတဲ့ ဘောလုံးအမွငျတှရှေိသလို ၊ ဂိုးသှငျးကောငျးပွီး ထိနျးခြုပျရ ခကျခဲတဲ့ ကစားသမား တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမှာ မတူညီတဲ့ ထူးခွားခကျြတှရှေိနပွေီး ဘယျသူကတော့ သိသိသာသာပိုကောငျးမှနျတယျလို့ ရှေးခယျြရခကျခဲ့နစေပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိုဇေးကတော့ မတူညီတဲ့ လိဂျတှမှောပွောငျးရှေ့ ကစားနိုငျနတေဲ့ ရျောနယျဒိုက ဘာစီလိုနာကွယျပှငျ့ထကျတော့ပိုသာတယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မကျဆီဟာ ဘောလုံးလောကမှာအသငျးတဈသငျးထဲမှာကစားတဲ့ သစ်စာရှိမှုဆိုတဲ့ ထောငျခြောကျမှာ ပိတျမိနတေဲ့ သူတဈယောကျလို့လညျးပွောဆိုထားသှားခဲ့ပွီး မကျဆီအနနေဲ့လညျး ဘာစီလိုနာကနထှေကျခှာပွီးအသငျးသဈတဈခုမှာပွောငျးလဲကစားဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခရြာမှာ ခကျခဲနသေူတဈဦးလို့လညျး သုံသပျသှားခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှကေကော မကျဆီဒါမှမဟုတျရျောနယျဒိုတို့နှဈဦးမှာ ဘယျသူကစှမျးဆောငျရညျပိုကောငျးတယျလို့ထငျပါလဲ….
ဘာစီလိုနာအသင်းတစ်သင်းထဲမှာ ကစားတဲ့သူ ဖြစ်နေသမျှတော့ မက်ဆီဟာ စီရော်နယ်ဒိုထက်ပိုမကောင်းဘူးလို့ အိုဇေးကတော့ ပြောပြီ….
စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီ ဘောလုံးစွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်သူပိုကောင်းလဲ….?
နောင်နှစ်တွေများစွာကြာမြင့်ချိန်အထိ ဘောလုံးလောကမှာ ရေးပန်းအစားဆုံးမေးခွန်းဖြစ်နေအုံးမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကို အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကစားသမား အိုဇေးကလည်းသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ သုံးသပ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ အသင်းဖော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မီဆူးလ် အိုဇေးကတော့ စီရော်နယ်ဒိုဟာ မတူညီတဲ့နီုင်ငံတွေရဲ့ လိဂ်တွေမှာ ခြေစွမ်းကျဆင်းမသွားပဲ ထိပ်တန်းအဆင့်ကစားနီုင်ခဲံတာကြောင့် မက်ဆီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူတို့နှစ်ဦး ဘောလုံးကစားခြင်းကနေ အနားယူသွားခဲ့ရင်တောင် ငြင်းခုန်မှုတွေကနေပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပရိသတ်တွေက စီရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီ ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ ငြင်းခုံမှုအပေါ် အိုဇေးတို့လို နာမည်ကျော်တွေရဲ့ သုံသပ်မှု ထင်မြင်ချက်တွေကိုသိချင်နေကြပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့က ရော်နယ်ဒိုဟာ ဆာအူဆိုလိုအသင်းကို သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရယူခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဘောလုံးသမိုင်းမှာ တရားဝင်ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ ကစားသမား အဖြစ် ဂျိုးဆပ် ဘီကန်နဲ့အတူ နံပါတ်(၁)နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သွင်းဂိုး ၇၅၉ ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးခဲ့ပြီး နံပါတ်(၁)နေရာကိုရောက်ရှိလာနေပေမယ့် အဆင့်(၃)နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ပီလီကတော့ သူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးနံပါတ်တွေနဲ့ အခုအချိန်အထိ အငြင်းပွားလျက်ရှိနေပါသေးတယ်။
မက်ဆီဟာလည်း သွင်းဂိုးရယူထားတဲ့နေရာမှာ အဆင့်(၄)နေရာမှာရှိနေပြီး (၇၄၂)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ပီလီရဲ့ အသင်းတစ်သင်းတည်းမှာ ကစားပြီးသွင်းဂိုး(၆၄၃)ဂိုးကို ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ကာ အခုအချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်သွင်းယူပေးထားတဲ့ဂိုးဟာ (၆၄၆)ဂိုးရှိလာပါပြီ။ Ballon d’Ors ဆုမှာတော့ ရော်နယ်ဒိုထက် ဆုတစ်ဆုပိုများနေပြီး Free kick ကနေဂိုးသွင်းယူထားမှုမှာလည်း မက်ဆီက တစ်ကြိမ်ပိုများနေပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ တစ်ခေတ်ထဲမှာ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို ပေါ်ခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြပြီး ရော်နယ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ စနစ်ကျတဲ့လေ့ကျင်မှု၊ နေထိုင်စားသောက်တဲ့ပုံစံ၊ ခေါင်းတိုက်စွမ်းရည် ၊ ဂိုးသွင်းကောင်းမှု စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်နေသလို လူငယ်ကစားသမားအများစုရဲ့ အိုင်ဒေါဖြစ်နေသူတစ်ဦးပါ။ မက်ဆီကတော့ သူ့ရဲ့ ပါရမီပေါ်အခြေခံပြီး လှပတဲ့ ကစားဟန်တွေနဲ့ နောက်တန်းကစားသမားတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ထူးခြားတဲ့ ဘောလုံးအမြင်တွေရှိသလို ၊ ဂိုးသွင်းကောင်းပြီး ထိန်းချုပ်ရ ခက်ခဲတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာ မတူညီတဲ့ ထူးခြားချက်တွေရှိနေပြီး ဘယ်သူကတော့ သိသိသာသာပိုကောင်းမွန်တယ်လို့ ရွေးချယ်ရခက်ခဲ့နေစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုဇေးကတော့ မတူညီတဲ့ လိဂ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့ ကစားနိုင်နေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုက ဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့်ထက်တော့ပိုသာတယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မက်ဆီဟာ ဘောလုံးလောကမှာအသင်းတစ်သင်းထဲမှာကစားတဲ့ သစ္စာရှိမှုဆိုတဲ့ ထောင်ချောက်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့လည်းပြောဆိုထားသွားခဲ့ပြီး မက်ဆီအနေနဲ့လည်း ဘာစီလိုနာကနေထွက်ခွာပြီးအသင်းသစ်တစ်ခုမှာပြောင်းလဲကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာ ခက်ခဲနေသူတစ်ဦးလို့လည်း သုံသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကကော မက်ဆီဒါမှမဟုတ်ရော်နယ်ဒိုတို့နှစ်ဦးမှာ ဘယ်သူကစွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပါလဲ….